दलबलसहित देउवा सभापतिको लागि उम्मेद्धवारी दर्ता गर्न पुगे राष्ट्रियसभा गृह, महामन्त्रीमा डा. महत र प्रदीप पौडेल – Himshikharnews.com
दलबलसहित देउवा सभापतिको लागि उम्मेद्धवारी दर्ता गर्न पुगे राष्ट्रियसभा गृह, महामन्त्रीमा डा. महत र प्रदीप पौडेल
२५ मंसिर २०७८, शनिबार १७:३७
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औं महाधिवेशनमा पूनः सभापतिको लागि उम्मेद्धवारी दर्ता गराएका छन् । देउवा उम्मेद्धवारी दर्ता गर्न दलबलसहित राष्ट्रियसभा गृह पुगेका थिए । उनले आफू जित्नेमा ढुक्क रहेको पनि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
उनको प्यानलबाट उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गच्छदारले उम्मेद्धवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेलले उम्मेद्धवारी दर्ता गराएका छन् । देउवाले आफूले पहिलो चरणमै जित्ने विश्वास दिलाए ।रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट